जीवन/ दर्शन / शैली - Page 88 of 94 - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and morewww.khabardabali.com | Page 88
असार ६ गते, २०७२ - १९:३३
सावधान ! दुध पिउँदा लाग्नसक्छ एड्सजस्ता थुप्रै गम्भीर रोग !
६ असार । अहिलेसम्म हामीले दुधले स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाको बारेमा पढेका छौं तर अब दुध मानिसहरुका लागि निकै खतरनाक हुने बताइएको छ । हो, तपाईंले सही सुन्नुभयो । अनलाइनमा बिक्रि भइहरेको मानिसको दुधले मानिसहरुका...
असार ४ गते, २०७२ - १८:००
४ असार । धेरै मानिसहरुले झुट बोल्नु नराम्रो भन्छन् तर कहिलेकाँही राम्रो प्रयोजनका लागि बोलिने झुटलाई स्विकार गर्न सकिने पनि बताइन्छ । तपाईंहरु सबैलाई ‘झुटो कत्तिको बोल्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधियो भने प्रायःजसो...
असार ४ गते, २०७२ - ०२:५८
गर्मिबाट जोगिन भारतिय अभिनेत्रि आलियामा ४ टिप्स
३ असार, काठमाडौं । अभिनेत्री आलिया भट्ट उनी पनि गर्मीबाट जोगिन हरदम कोशिश गरिरहेकी छिन् । एक भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै आफ्ना केही आइडिया गर्मीसँग जुध्न कामलाग्दो रहेकी दाबी समेत गरेकी छिन् । पानी धेरै...
असार ४ गते, २०७२ - ०२:४१
यौन पार्टनरलाई चरम उत्तेजनामा ल्याउने घरेलु तरिका
३ असार, काठमाडौं । यौन उत्तेजना बढाउन पनि मालिस राम्रो बिधि मानिन्छ । यसका लागि थाइ र छातीमा घर्षणात्मक र सुम्सुम्याहट मालिस बिधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ५० वर्ष कटेका मानिसले यो बिधिमा मालिस गर्दा नपुसंकता हुने सम्भावना...
असार ४ गते, २०७२ - ००:१२
पेटको बोसो नौनीजसरी पगाल्छ यी आहारले
३ असार । केही खाद्य पदार्थलाई आफ्नो आहारमा समावेश गरेर तपाईं सजिलैुसँग बोसो कम गर्न सक्नुहुन्छ । यस्ता खानेकुराले मोटाबोलिजमलाई बढाएर शरिरबाट बोसो निकाल्न हर्मोनलाई अत्यधिक सक्रिय गराउँछ । आउनुहोसु, यस्तो आहारको...
असार ३ गते, २०७२ - २३:३५
एसएलसीको नतिजा थाहा पाउने सजिलो तरिका
३ असार काठमाडौं, एसएलसी परिक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक भएकाे छ । नतिजा हेर्नको लागि विभिन्न विधिहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । एसएमएसः नतिजा थाहा पाउनको लागि एसएमएस गर्न सकिन्छ । SLC लेखेर एक स्पेस दिएपछि सिम्वल नम्बर...
असार १ गते, २०७२ - १६:५४
मधुमेह रोगीका लागि खतरनाक तिते करेला, थाहा पाऔं यसका साइड इफेक्ट
तिते करेला निकै लाभदायक र पौष्टिक तरकारी हो । शरिरका लागि करेलाको सेवन निकै फाइदाजनक मानिन्छ । मधुमेहका रोगीलाई पनि धेरैपटक तीते करेला खाने सल्लाह दिइन्छ तर यसको प्रयोगमा थोरै सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । करेलाका...
असार १ गते, २०७२ - १५:४४
तपाईंलाई थाहा छैन, कण्डमका यी ४ साइड इफेक्ट
कण्डम प्रयोगको फाइदाको बारेमा त धेरैलाई थाहा होला तर कण्डमका पनि केही यस्ता साइड इफेक्ट छन् जसको बारेमा निकै कम मानिसहरुलाई थाहा छ । कण्डमले तपाईंको सेक्स लाईफलाई प्रभावित गर्नुका साथै यसले यौनसम्बन्धी रोगसमेत...
जेठ ३२ गते, २०७२ - २३:५०
गर्मीले हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी बनाउनुहोस् आफ्नो कोठा चिसो
गर्मी वा जाडो, कुन महिना ठिक ? यो प्रश्नको उत्तरमा धेरैले जाडो महिना रोज्नुहोला । धेरैलाई मन नपर्ने मौसम गर्मी महिनाले सबैलाई आफ्नो पकडमा पारेको छ । यसको पञ्जाबाट फुस्किन धेरैले अनेकौं कोसिस गर्छन् । कत्तिको कोसिस...
जेठ ३२ गते, २०७२ - ००:०४
घामबाट बच्न सनस्क्रिन लगाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुस् यसका बेफाइदा
गर्मी मौसममा घरबाट बाहिर निस्कनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि सनस्क्रिन लगाउने सल्लाह दिइन्छ । सबैले सनस्क्रिनले घामको यूभी किरणबाट बचाउने बताउँछन् । तर घामबाट बचाउने केही सनस्क्रिनमा घातक रसाइन पाइने गर्दा छालामा...